Google Glass 2.0: mbụ foto iputa - News Ọchịchị
Google Glass 2.0: mbụ foto iputa
The ọhụrụ version nke Google isi-ndokwasa kọmputa e ekpughe na a US ọchịchị ịgba akwụkwọ.
Isiokwu a na-akpọ “Google Glass 2.0: mbụ foto iputa” e dere site Alex Hern, n'ihi na theguardian.com on Tuesday 29th December 2015 12.19 UTC
N'agbanyeghị -egbu ya anya ná mmalite nke afọ a, Google kpugheere a ọhụrụ version nke ya Glass wearable kọmputa, lekwasịrị anya kpọmkwem n'ebe enterprise ulo oru dị ka ahụike na n'ichepụta.
Na filings na American gọọmenti etiti nkwukọrịta ọrụ, na search ike nwere bipụtara akpa foto nke redesigned ngwaọrụ, nke ugbu a na atụmatụ a foldable ogwe aka ejide nnọọ ibu ihuenyo.
Ọzọ onyinyo nke ọhụrụ Google Glass ngwaike. Foto: FCC / Google
na eze na, Google adịghị kwetara na ngwaọrụ ọhụrụ ịdị adị, n'agbanyeghị eziokwu ahụ ya enterprise-okowụk relaunch kemgbe ihe ọha mmadụ maara ebe ọ bụ na July. Ndị asịrị na-atụ aro na ọhụrụ version nke Glass e wuru na-waterproof na ike-yi, nakwa dị ka na-atụ anya tech bumps ka mma wifi, ngwa ngwa processors, na mma igwefoto na batrị.
The ikpeazụ ụlọ ọrụ kwuru na okwu e na Glass e "agụsị" ya ibuo itie ke Google si elu research X nkewa, ma dọba n'okpuru nke Tony Fadell, nwoke n'azụ iPod na akwu smart-home ụlọ ọrụ.
The relaunch nwere ike a ga-agbaso mgbe e mesịrị site a ọhụrụ n'ji version. Ma n'ihi na ugbu, ngwaọrụ a ga-iji na azụmahịa ahịa ndị na-enweta ihe ozugbo uru site n'inwe a isi-ndokwasa ngosi. Doro anya ojiji-ikpe-agụnye ịwa ahụ na n'ichepụta, ebe aka-free ohere a olu-achịkwa ihuenyo pụrụ nnọọ ịdị na bara uru. Re-launching n'ime a azụmahịa na gburugburu ebe obibi ga-ekwe ka ụlọ ọrụ iji zere inwe ga-enwe ọtụtụ n'ime nsogbu ndị nwetara site n'ji ọrụ, karịsịa nzuzo nchegbu kpalie site yi a isi-ndokwasa igwefoto ke eferife.
21234	0 Alex Hern, Nkeji edemede, Google, Google Glass, News, Technology
← ga- 2016 -abụ afọ mebere eziokwu Ịgba Cha Cha amalite? The 25 kasị atụ anya egwuregwu vidio nke 2016 →